02/11/2018 - Page 2 sur 3 -
Aretina AVC : Tsy mifidy taona
02/11/2018 admintriatra 0
Mitombo isa ireo olona voan’ny aretina fatapahana lalan-drà amin’ny atidoha, na AVC eto Madagasikara. Tsikaritra izany tao anatin’ny 3 na 5 taona teo ho eo, raha ny fanamarihan’ny mpitsabo Rasolofonaina, manam-pahaizana momba ny aretina AVC …Tohiny
Sambo rendrika tany Marovoay : Mpanamory 4 naiditra am-ponja
Mpanamory efadahy no indray nosamborina sy nanaovana famotorana tamin’ilay loza an-dranomamy niteraka faharendrehana sambo tany amin’ny reniranon’i Betsiboka, ny 23 oktobtra lasa teo. Ireto mpanamory ireto no notazonina ho tompon’antoka voalohany tamin’iny tranga namoizana ain’olona …Tohiny
1 novambra : Nandeha ny tsenan’ny voninkazo
Tsy toa ny isan-taona fa nandeha ny tsenan’ny voninkazo ho an’ity taona 2018 ity, raha noharina tamin’ny 2017. Ho an’ny Tinah, mpivarotra voninkazo, tetsy amin’ny Pullman dia nilaza fa nandeha ny tsenany tamin’ity taona ity. …Tohiny
Mafy ihany ity mivavaka amin’ny vola ity, ary mahavita « mivaro-tena » mihitsy ny mpanao politika noho izay resa-bola izay. Nanao fanambarana ny kandidà Sahara Rabearisoa, fa hanohana ny kandidà Andry Rajoelina, ny fihodinana voalohany …Tohiny
Distrikan’Avaradrano : Fotodrafitrasa fototra dimy sosona notokanan’ny Filoha